Myanmar Youth Media Club - ချစ်ခြင်းသံစဉ်
ဆိုတာကိုတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီး accept လုပ်မိလိုက်ပါတယ်။neversaygoodbye:မင်္ဂလာပါme: မင်္ဂလာပါရှင်neversaygoodbye:မအိပ်သေးဘူးလားme:အိပ်ချင်စိတ်မရှိသေးလို့neversaygoodbye:ခုဘာလုပ်နေလဲme:ဘာမှထွေထွေထူးထူးမလုပ်ပါဘူး neversaygoodbye:သြော်... စာမလုပ်ဘူးလား မနက်ဖြန်စာမေးပွဲရှိတယ် မဟုတ်လားme:ဟင်... ဘယ်လိုသိတာလဲဟင် ကျွန်မစာမေးပွဲရှိတာneversaygoodbye:စုံစမ်းထားတာပေါ့me:ဒါဆိုရှင်က ကျွန်မကိုသိနေပြီပေါ့neversaygoodbye:ဒါပေါ့me:ဒါပေမယ့် ကျွန်မကရှင့်အကြောင်းမသိသေးဘူးရှင့်neversaygoodbye:ကိုယ် ပြောပြမှာပေါ့ ကိုယ့်နာမည်က မာန်။ အသက်က 22 မင်းထက်3နှစ်ကြီးတယ်နေတာက ရန်ကုန်ပဲme:ဟင် ကျွန်မအသက်ကိုလည်းသိတယ် ရှင်ဘာတွေလိုက်စုံစမ်းထားသေးလဲ ဘာလို့ ကျွန်မအကြောင်းလိုက်စုံစမ်းနေတာလဲneversaygoodbye:ဟားဟား မေးလိုက်တာ ဆက်တိုက်ပဲ မနက်ဖြန်မှဆက်ပြောပြမယ် ကိုယ်အိပ်တော့မယ် အိပ်မက်လှလှလေးမက်ပါစေကွာ Byeပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူ offline ဖြစ်သွားလေသည်။ ဘယ်လိုလူမှန်းလဲမသိ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်များနောက်နေတယ်ထင်၍ ဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့လည်း တစ်ယောက်မှမသိ။ နောက်တစ်နေ့ကျောင်းရောက်ပြီး သူငယ်ချင်းများကိုပြောပြတော့ တစ်ယောက်ယောက်လာနောက်တာနေမှာဟု ထင်မြင်ချက်ပေးသည်။ ကျွန်မလည်း သူ့အကြောင်းကို ခေါင်းထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ည 10 နာရီ တိတိ...ကျွန်မ Online တက်လာခဲ့သည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် သူရှိနှင့်တာတွေ့ရလေ၏။neversaygoodbye:လာပြီလားme:အင်း... မနေ့တုန်းက ကျွန်မမေးထားတာ ရှင်မဖြေသေးဘူးneversaygoodbye:သြော်... ဒါလား ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကို လိုက်စုံစမ်းထားတာအပြစ်တဲ့လားme:ရှင်ကျွန်မအကြောင်းဘယ်လောက်သိနေပြီလဲneversaygoodbye:သိပ်တော့မများပါဘူး... မင်းရဲ့ မိသားစု၊ ပညာရေး၊ ဘာကြိုက်တတ်လဲ ဘာမကြိုက်တတ်လဲနဲ့ အဓိကကတော့ဖုန်းနံပါတ် ဒီလောက်ပါပဲ ဖုန်းမဆက်တာကတော့ မင်းနဲ့မသိသေးလို့ Online မှာမင်းနဲ့အရင် ခင်မင်ခွင့်ရပြီးမှ ဖုန်းဆက်မလို့ ကိုယ်မင်းဆီဖုန်းဆက်လို့ရလားme:ကျွန်မမသိတဲ့သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းမပြောဘူးရှင့်neversaygoodbye:ကိုယ်က သူစိမ်းမှမဟုတ်တာ me:ကျွန်မရှင့်ကိုမသိဘူးneversaygoodbye:ကိုယ်ပြောပြီးပြီပဲ သိချင်တာရှိရင်မေးလို့me:ရှင့်အကြောင်းပြောပြneversaygoodbye:ကိုယ်က အီးမေဂျာက ပြီးတော့ တစ်ဦးတည်းသောသား လိုချင်တာမရရအောင်ယူတတ်တယ် လှလှပပအရာကို ကြိုက်တယ် အထူးသဖြင့် Milk ကို...me:ဟင် ရှင်ကျွန်မကို ရည်းစားစကားပြောနေတာပဲ block ခံချင်လို့လားneversaygoodbye:ဟိုးထားဟိုးထား မမ... စိတ်ကြီးပဲနော် ကိုယ်ပြောထားတယ်လေ မင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်မှာရှိတယ်လို့ မင်းကိုယ့်ကို block ရင် ကိုယ်မင်းဆီဖုန်းဆက်မှာပေါ့me:တော်ပြီ ကျွန်မဘာမှမသိချင်တော့ဘူး အိပ်တော့မယ် ဟုပြောပြီး ကျွန်မ gtalk ကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဘယ်လိုလူမှန်းမသိ။ အင်တာနက်ထဲက QQ တွေနေမှာပါဟု ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ဖြေသိမ့်ပြီး ကျွန်မအိပ်ပစ်လိုက်သည်။ မနက်ကျောင်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်းများနှင့် ကန်တင်းထိုင်နေရာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး“ဟဲလို ကိုယ်မာန်ပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ဆီက Milk ကို စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ ခဏခေါ်သွားလို့ရမလား”သူငယ်ချင်းများအားလုံးကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်လာရာ... “ဟဲ့ ဘာကြည့်နေတာလဲ။ ဒါငါပြောပြောနေတဲ့ မာန်”“သြော်... မာန်ဆိုတာ ဒီတစ်ယောက်ကိုး။ ကောင်းပါပြီရှင်။ ဒါပေမယ့် ခဏပဲခေါ်သွားနော်။ ပြန်လည်းလာပို့ဦး”“ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ Milk ကို ကျွန်တော် မှည့်တစ်ပေါက်မှ မစွန်းစေပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပို့ပမယ်”“ဟယ် ကိုမာန်တို့ကတော့ နောက်ပြီ။ ကဲကဲ မကြာစေနဲ့နော်။ ကျွန်မတို့စာနည်းနည်းလုပ်စရာရှိလို့”“ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ ခွင့်ပြုပါဦး”ဟုပြောပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ ကန်ဘောင်ပေါ်ရောက်တော့ ကျွန်မက “ရှင် ကျွန်မခွင့်ပြုချက်လည်းမတောင်းဘူး”“ဒါပေမယ့် မင်းလိုက်လာတယ်မဟုတ်လား။ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား”ရုတ်တရက် ကျွန်မဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားသည်။ထိုအခါ သူက“Milk... ကိုယ်အဖြေတောင်းထားတဲ့ ကိစ္စဘယ်လိုလဲ”“ကျွန်မရှင့်အကြောင်းမသိသေးဘူး”“ဒီစကားပဲပြောတတ်တာလားမသိဘူး။ ကောင်းပါပြီ။ Milk ကိုယ့်ကို အချိန်ယူပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ”“နားလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမာန်”“ရပါတယ်ဗျာ။ မစောင့်လို့လည်း ရမှမရတာ”ဟု သူကပြုံးစိစိဖြင့်ပြောလိုက်လျှင် ကျွန်မဘာမှန်းမသိရင်တစ်ချက်ခုန်သွားပါသည်။ ထို့နောက် သူ့ကတိအတိုင်း ကျွန်မကိုပြန်ပို့ပါသည်။ ပြန်ခါနီးတွင်လည်း “ကဲ ကျွန်တော့ကတိအတိုင်း မှည့်တစ်ပေါက်မှမစွန်းပဲပြန်လာပို့ပါပြီခင်ဗျား။ သြော်... Milk ကိုယ်ဒီညဖုန်းဆက်မယ်နော်”ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ သူထွက်သွားတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းအစ်ပါတော့သည်။“မှန်မှန်ပြောနော် အဲဒီစတိုင်လ်ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ကောင်လေးက တကယ်မာန်လား။ နင်နဲ့ဘာတွေပြောလဲ”ကျွန်မလည်း အလုံးစုံပြောပြလိုက်ရာ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှတစ်ယောက်က“သူ့ကိုမြင်ဖူးပါတယ်လို့စဉ်းစားနေတာ ခုမှသတိရတယ်။ ငါတစ်ခါမြင်ဖူးပါတယ်။ ငါ့အစ်ကိုရဲ့သူငယ်ချင်းထဲကပဲ ”“သြော် ”ထိုည 10 နာရီ ကျွန်မ online တက်လာခဲ့သည်။ သူ့ကိုမတွေ့။ ထိုအချိန်တွင် handphone မှဖုန်းသံမြည်လာ၍ ကြည့်လိုက်လေရာ ကျွန်မမသိသော နံပါတ်တစ်ခု “ဟဲလို”“Milk လား။ ကိုယ်မာန် ပါ”“သြော်... ကိုမာန်”“အင်း... ဘာလုပ်နေလဲ”“ရေဒီယိုနားထောင်နေတယ်”“Online Radio လား”“အင်း”“ဘာ Radio လဲ”“MYMC”“Ok ... ကိုယ်သီချင်းတောင်းပေးမယ်” “အင်း ကျေးဇူး”“ Ok ကိုယ်ဖုန်းချလိုက်ပြီနော်။ သီချင်းသံလေးနဲ့အတူ အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေဗျာ”“ Thank You”သူဖုန်းချသွားပြီး ခဏအကြာတွင် ရေဒီယိုမှ “ခုလာမယ့်သီချင်းကတော့ Darryl Farris ရဲ့ Give Me Your Heart ဆိုတဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ မာန်မှ Milk အတွက်တောင်းဆိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Milk အတွက်စကားကတော့ သူတောင်းဆိုပေးတဲ့သီချင်းကို နားထောင်ပြီး ကျေးဇူးပြု၍ သူ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးပါတဲ့။ ကဲ... သီချင်းလေးကိုနားထောင်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ”DJ ရဲ့ Announcement ကိုကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်မပြုံးမိသွားသည်။ သူတောင်းဆိုပေးတဲ့ သီချင်းနားထောင်ပြီး ထိုညကျွန်မ အိပ်မက်လှလှပင်မက်လိုက်ပါသည်။အဝေးဆုံးမသွားနဲ့ ချစ်သူရာ ကိုယ့်ရင်ခွင်မှာ မှေးစက်ပါ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အကြင်နာ ထာဝရအဆုံး တည်ရှိမှာ ...သူပေးလာတဲ့ ကဗျာတိုကို ကျွန်မဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်မိပါသည်။“ ဟာ ဘာရယ်တာလဲ။ ကိုယ်ကဗျာမှ မရေးတတ်တာ။ ကိုယ့်ခံစားချက်အတိုင်း ရေးထားတာ”“မဟုတ်ပါဘူး။ သဘောကျလို့ပါ”“ကိုယ့်ကိုလား”“လိပ်ကြီး”“ဟင် လိပ်တဲ့။ အခေါ်ခံနေရတာပဲ။ မထူးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုချစ်လား”“မချစ်ဘူး”“မညစ်ပတ်နဲ့ကွာ”“ရေချိုးထားတယ်”“မရစ်နဲ့”“မူလီမရှိဘူး”“ဟာ... ကိုယ် စိတ်မရှည်တော့ဘူးနော်။ ဖက်နမ်းမိလိမ့်မယ်”“ပါးရှစ်စိတ်ကွဲသွားမယ်”“စိတ်ကြီးပဲ”“နည်းနည်းလေးစောင့်မှပေါ့ရှင်။ ရှေ့လ October 27 ကျရင် ကျွန်မမွေးနေ့။ အဲဒီနေ့ကျရင်ပေးမယ်”“တကယ်နော်”“အင်း”“Yahoo... ပျော်လိုက်တာကွာ”“ဘယ်သူကရှင့်ကို ပျော်ခိုင်းနေလို့လဲ”“အာကွာ.. အဲလိုမြှောက်ပြီး မရိုက်ချနဲ့လေ။ ပျော်တာတောင်မှ ကိုးလိုးကန့်လန့်ကြီး”“ဟဟား”“ရယ်မနေနဲ့။ ပါးစပ်ထဲယင်ကောင်ဝင်ဥနေဦးမယ်။ ဒီည 10 နာရီ သီချင်းတောင်းပေးမယ်။ နားထောင်နေနော်”“အင်း”အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း Radio ကိုတန်းဖွင့်ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရေမိုးချိုး၊ ထမင်းစား၊ စာလုပ်။ စာကိုဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားသွားလဲမသိ မျက်စိညောင်းလာမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားမိတော့သည်။ အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ 9:55 pm။ Radio ကိုအသံချဲ့လိုက်ပြီးနားထောင်လိုက်သောအခါ Akon သီချင်းလာနေသည်။ ထိုသီချင်းပြီးသွားသောအခါ DJ မှ “ခုလာမယ့်သီချင်းကတော့ Jordin Spark ရဲ့ Tattoo ဆိုတဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို မာန်မှတောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပြီး Milk အတွက် ရင်ထဲကသီချင်း နောက်တစ်ပုဒ်ပါတဲ့။ ခံစားနားဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်”I can't waste time so give me the moment I realize nothing's brokenNo need to worry about everything I've doneLived every second like it was my last one.Don't look back gotanew directionLoved you once , needed protection.You're still apart of everything I do ,you're on my heart just likeatattoo , Just likeatattoo , I'll always have you. ~ ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxဒီလိုနဲ့ကျွန်မမွေးနေ့ တဖြည်းဖြည်းနီးလာပါပြီကော... ယနေ့ပင် 26 ရက်နေ့ဖြစ်နေပြီ။ ခုလည်းကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် ကန်တင်းထိုင်နေတုန်းမှာပင်...“ဟဲ့ Milk... မနက်ဖြန်နင့်မွေးနေ့နော် ”“အင်း... ဟုတ်တယ်”“ဘယ်မှာလုပ်မလဲ။ ဘာကျွေးမလဲ”“အိမ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်မယ်။ BBQ ကျွေးမယ်”“ကောင်းပါ့။ ဒါနဲ့ ဒီနေ့ ကိုမာန်ပျောက်နေတယ်နော်”“အင်းဟုတ်ပါ့။ ငါလည်းမတွေ့မိဘူး”ထိုအခါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က... “မနက်က ငါတွေ့မိတယ်ဟ။ Milk အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုသွားစီစဉ်နေတယ်ဆိုပဲ ”ဘာများပါလိမ့်။ ကျွန်မစဉ်းစားရင်း ရင်ခုန်သံမြန်လာသည်။ မနက်ဖြန်မြန်မြန်ရောက်ချင်လှပါပြီ။ထိုည 10 နာရီ ထုံးစံအတိုင်းပင် သူ့ဆီမှ ဖုန်းဆက်လာသည်။“ဟဲလို”“ကိုယ်ပါ”“ခေါင်းကော”“မနောက်ကောင်းဘူးကွ။ ကိုယ်ခုဘာဖြစ်နေလဲသိလား”“ဘယ်လိုလုပ်သိမှာတုန်း”“ကိုယ်ရင်အရမ်းခုန်နေတယ်ကွာ။ မနက်ဖြန် Milk ဆီကအဖြေရမယ့်နေ့လေ”“...”“ခု Milk ကိုပေးမယ့်လက်ဆောင်ကိုမြင်ယောင်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်”“သိပ်လည်းစိတ်ကူးမယဉ်နဲ့ဦးရှင့်။ မနက်ဖြန် ရှင်ဝမ်းနည်းချင်ဝမ်းနည်းရမှာ”“ဟာကွာ.. ဒီညတော့ ကိုယ့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်ကူးယဉ်ခွင့်ပေးကွာ။ ဖီးလ်တောင်ငုတ်ချင်ချင်ဖြစ်သွားပြီ”ကျွန်မရယ်လိုက်မိပါသည်။ ကျွန်မလည်း သူ့နည်းတူ ရင်ခုန်နေပါသည်။ သူ့ကိုလက်ခံဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလေ။“Ok See You နော်။ မနက်ဖြန်မှတွေ့မယ်”“အင်း”“ Milk ကို သိပ်ချစ်တယ် ”ကျွန်မဖုန်းကို ပါးနှင့်ထိလိုက်လေသည်။ သူကျွန်မအနားလာပြောသလိုပါပဲလား။ ကျွန်မလည်းရှင့်ကိုသိပ်ချစ်ပါတယ် ကိုမာန်ရယ် ဟု တိုးတိုးလေးရွတ်မိလိုက်ပါသည်။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOctober 22 2009ဒီနေ့ကျွန်မရဲ့ အသက် 20 ပြည့်တဲ့နေ့။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ကို အဖြေပေးရမယ့်နေ့ ညနေပိုင်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ တဖွဲဖွဲလာကြပါပြီ။ သို့သော် သူ့ကိုမတွေ့ရသေး။ အချိန်တော်တော်ကြာလာသည့်အထိ သူ့ကိုမတွေ့သေးသောကြောင့် ကျွန်မစိတ်ပူလာပြီး ဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ ဖုန်းမကိုင်။ထိုအချိန် လူတစ်ယောက် ခြံရှေ့ထိပြေးလာပြီး “ ဒါ Milk ရဲ့ Birthday Party လားမသိဘူး ”“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မ Milk ပါပဲ။ ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဟင်”“ကျွန်တော် မာန်ရဲ့သူငယ်ချင်းပါ။ မာန်က Milk အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်သွားယူပြီး လမ်းအကူးမှာ ကားတိုက်မိလို့ ခုဆေးရုံပေါ်ရောက်နေတယ်။ ဒဏ်ရာတော်တော်ပျင်းတယ် ”“ရှင် ”ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံးမိုးကြိုးပစ်ချသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ရုတ်တရက်ဆွံ့အသွားသည်။ထိုစဉ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က... “ Milk... နင် ကိုမာန်ရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့လိုက်သွား။ ငါတို့နောက်ကလိုက်လာခဲ့မယ်”ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပြီး မာန်သူငယ်ချင်းနှင့်လိုက်လာခဲ့သည်။ ဆေးရုံရောက်တော့ မာန်ကသတိမရတစ်ချက် ရတစ်ချက်။ ကျွန်မမရှက်နိုင်တော့။ မာန်ကိုပြေးဖက်လိုက်သည်။ ကျွန်မအောင့်ထားသမျှ မျက်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာသည်။ ထိုစဉ် မာန်မျက်လုံးပွင့်လာပြီး...“Milk... Sorry နော်။ ကိုယ် Milk ရဲ့ မွေးနေ့ကို မလာနိုင်ခဲ့ဘူး”“...”သူ့လက်တစ်ဖက်မြှောက်လာသည်။ လက်ထဲမှာ လက်ဆောင်တစ်ခု “ဒါက Milk အတွက် Present ”ကျွန်မဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ငွေလက်စွပ်လေးတစ်ကွင်း။ အသဲပုံလေးထဲမှာ ရေးထားတာကတော့ " 2M4eva " “ကိုယ့်နာမည်လည်း M ပဲ။ Milk နာမည်လည်း M ပဲ။ ဒါကြောင့် 2M လို့ရေးထားတာ”သူအသံယဲ့ယဲ့လေးဖြင့်ရှင်းပြသည်။ “ကိုယ့်ကို အဖြေပေးလို့ရပြီလားဟင်”“ရှင့်ကို ကျွန်မသိပ်ချစ်တယ်ကိုမာန်ရယ်။ အရမ်းချစ်တယ်”ကျွန်မအဖြေကို သူကြားပြီးသောအခါ ပြုံးပြီးမျက်လုံးတဖြေးဖြေးမှိတ်သွားလေသည်။ သူ အသက်မရှုတော့ပြီ။ နောက်တစ်လခန့်ကြာသောအခါ...အသစ်စက်စက် အုတ်ဂူတစ်လုံးရှေ့တွင် အနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်။ သူမ၏လက်ထဲတွင် အနက်ရောင် နှင်းဆီပန်းတစ်စည်း။ပန်းစည်းကို အုတ်ဂူပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီး...
“ကိုမာန် ရှင်ကတော့ အေးချမ်းသွားပြီပေါ့နော်။ ရှင် ကျွန်မကိုတောင်မစောင့်ဘူးနော်။ ရှင့်အတွက် ကျွန်မအနက်ရောင်နှင်းဆီ ပန်းတစ်စည်းယူလာခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ထာဝရတဲ့။ ရှင်ကျွန်မကိုပေးဖူးတဲ့ ကဗျာလေးလိုပဲ ကျွန်မအချစ်ကရှင့်အတွက် ထာဝရတည်ရှိသွားမှာပါ။ နောင်ဘ၀ဆိုတာများတကယ်ရှိခဲ့ကြရင် ရှင်နဲ့ကျွန်မ မခွဲတမ်းအတူနေကြမယ်နော် ရာသက်ပန်ပေါ့ ကိုရယ်”
ဟု အုတ်ဂူရှေ့တွင် တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်ပါသည်။နောက် သူမ iphone မှ MYMC Radio ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ Radio မှ Mariah Carey ၏ Bye Bye သီချင်းက သူမအနီးတစ်ဝိုက် ပျံ့လွင့်လျှက်... Written by Jily တခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်တင်မယ်ဆိုရင် Jily (MYMC) ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
MYMC နဲ့ပက်သက်ပြီး အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် လုပ်ချင်တာနဲ့ Jily ကိုပြောပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့ Gtalk ID တွေ၊ နာမည်တွေအားလုံးက စိတ်ကူးယဉ်တွေပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေမှာစိုးလို့ အရင်ပြောပြထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးကို သဘောကျတယ်၊ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာတစ်ခုခုရေးခဲ့ပေါ့ဗျာ။ (မဟူရာ)
Content View Hits : 8511483